Contact Us	Maxaa diyaaradihii Yurub fadhiisiyay? Cibra qaadasho la xidhiidha Falkaanaha Iceland?
Marka aad Quraanka akhrido waxaad ku arkaysaa aayado aad u fara badan oo odhanaya hadalo micnahoodu yahay war miyaydaan fikiraynin? Quraanku wuxuu ilaa sadax daloolow meel ka kooban yahay taariikh ka sheekaynaysa dadkii inaga horeeyay. Waxaa suuragal ah markaad taariikhdaas akhriyayso inaad is tidhaahdo tolow saw dadkaasi caqli ma lahayn maxay Ilaahay u rumayn waayeen? Waxaad arkaysaa in la tusiyay aayado (Calaamado is daba joog ah). Haddana waxba laga aabaynin oo kobtii ayay ka miiseen! Haddaan u soo noqono dulucda sheekada oo ah duulimaadyadii Yurub maxaa baajiyay, waxaa inoo soo baxaya aayado aan ka liidanin kuwii ummadihii hore la tusi jiray laakiin aan cidinaba caad iyo muraad ka lahayn. Markaan dhex meeray saxaafada Soomaalida cid wax ka qortayba ma jirto sababtoo ah cidinaba uma aragto aayad. Mida kale saxaafada Soomaalida waxaa ku yar hal abuurka. Warka suxufiinta Soomaalidu qorayaan waa in cid hore oo waliba reer Galbeed ahi qortay. Nasiib daro waynaa!!
Aayadee ka wayn inaan Ilaahay qirno awoodiisa in Yurub oo sheeganaya inay horumar ka gaadhay tiknaloojiyada ay hawada isaga safri waydo afartii maalmood ee la soo dhaafay? Diyaaraduhu waxay khasaarayeen afartii maalmood ee la soo dhaafay lacag gaadhaysa $200 malyuun dharaartii?
Kaliya wuxuu falkaanahani keenay waa qiiq hawada ku faafay oo dhulka ka koreeya ilaa 30 000 Feet oo u dhiganta jooga diyaaraduhu ku duulaan! Cidna ma dilin ilaa haatan, guri iyo buundo midnana ma burburinin. Miyayna tani ahayn aayad caadi ah oo Ilaahay ina tusayo awoodiisa!
Waxaa xaniban taqriiban 5 malyuun oo ruux oo rakaab ahayd aduunka daafihiisa. Dadkaas xanibnay ee meela u duuli waayay waxaa ka mid ah Baraak Obaama oo ka qayb gali lahaa janaazadii madaxwaynihii Boland oo shilka diyaaradeed ku bakhtiyay. Miyuusan Obaama ahayn madaxwaynaha aduunka sheegtay inuu ugu xoog wayn yahay?
Habarta madaxa ka ah dalka Jarmalka ayaa waxay u hoyatay dalka Bortuqiiska kadib markii ay ka timid Maraykanka iyadoo oo gaadhi wayday Jarmalka. Waxay dhaxsin kale usii hoyatay dalka Talyaaniga., halkaas oo ay baabuur kaga sii safri doonto iyadoo dhex mari doonta dalka Usteeriya. Madaxwaynaha Latvia ayaa mudo 14 saac ah baabuur ugu safray wadanka Booland si uu ugaga qayb galo tacsiyada madaxwaynahoodii. Waxaa Landhan baaqanaya ciyaaro qoob ka ciyaar ah oo uu tumi lahaa Milley Cyrus oo meeluu soo mara la’ walina jooga Maraykanka. Waxaa Telefishinada la soo fadhiisiyay rag iyo haween saynisyahano ah oo ku takhasusay culuumta Falkaanayaasha mid walibana wuxuu dooni ayuu iska yidhi. Midna ilaa hada ma odhanin arinkan qadar Ilaahay ayuu ku socdaa ee dadku ha rumeeyo Ilaahooda hana la towbad keeno. Qoladan ku takhasustay falkaanayaashu haday wax ka yaqaanaan maxay noogaga sii digi waayeen inuu imaanayo? Jawaabtu waxaa weeye inay inyar ka garanayaan arinkan Ilaahay wuxuu Quraanka ku yidhi “Cilmiga waxaa la idinka siiyay in yar”. Alla Ilaahay run badanaa!! WAMAN ASDAQU MINALLAAHI QIILAN!!
Qoladan saynisyahanada sheegta waa kuwa habeen iyo maalin nagu wacdiya aduunkaa kululaanaya. Haddii aad ku nooshahay Yurub waxaad qiri inuusan aduunku kululaanin ee uu sii qaboobay. Dhulkeena Soomaaliya oo saxaare u eg, waxaa bishii Maajo ee sanadkan ka curtay gugii. Roobka gugu wuxuu caadiyan da’aa waxa ka danbeeya bisha Abriil. Bisha Maajo waa bisha Soomaalidu u taqaano Habar Adhi ee ay jirto milicda xoolaha laysa. Nimankan turuufo toorayaasha ah ee inoo sheegaya inay ka walbahaarsan yihiin aduunka kululaanaya waa nimanka ka buuxiyay aduunka gaalnimada, shirkiga, dulmiga, sinada, qaawanaanta iyo khamrada. Qoladani waa lug gooyo warkoodu. Ma diidani in horumar laga gaadhay arimo badan laakiin horumar lagu garan waayay Ilaahay oo lagaga durkayo saacad walba waa dib u dhac kii ugu xumaa. La yaab ma laha in aaladan Internetka ee aan hadda idiinku soo gudbiyay dhabaalkan uu yahay horukac uu gaadhay aadanuhu oo laxaad leh. Laakiin marka dhinaca kale laga eego, ereyga la waydiiyay Google ee ugu badan intii uu jiray boggaasi waxaa weeye ereyga “Galmo” iyada oo laga daawanayo fuxshiga iyo sinada Internet ka. Eebbe ma loo dhawaaday, mise waa laga durkay?
Bishii Diseenbar ee sanadkii 2005 waxaa dhacay bad gariir ka bilowday xeebaha Induniisiya. Waxaa la yaab lahaa in biyihii xeebaha Induniisiya ku dhuftay ay isla daqiiqadii ku dhufteen xeebaha Soomaaliya sida magaalada XAAFUUN. Alla Ilaahay awood badanaa. MAsaafada ay isu jiraan Induniisiya iyo Soomaaliya waa tobanaan kun oo kiiloo mitir. Saxaafada dalkaasi Induniisiya waxay qortay maalmahaas dhacdooyin layaab leh oo laga uruuriyay dad deganaa xeebaha dalkaasi. Dadkaasi waxay sheegeen in dhawr maalmood ka hor xilliga bad gariirku dhacayo la dareemayay xayawaanka oo isku uruursanaya meelaha buuraha ah iyaga oo ka fogaanaya dhulka hundaha ah ee joogiisu hooseeyo.
Dadku waa madax adag yahay oo si sahlan wax uma qaataan. Waxaynu nahay dadka xeebaha ku sinaysta ee fawaaxishta ku sameeya. Marna ma aynu ka fikirnay awooda biyahan badda inaga haysa ee halkaas kula ballantay. Biyaha badda hadaad u fiirsato aayad ka wayni ma jirto. Waa biyaha baaxada aad aragtay leh ee aan gabi ka hoosaynin. Way soo butaacayaan iyaga oo hir ah markaasay dib u noqonayaan. Mida kale biya caadi ah hadaad ciid ku shubto way liqayaan, biyahan badduna ciida dhulka waxba kama cunayaan!!! Alla Ilaahay awood badanaa.
Aan ku noqdo Falkaanihii diyaaradaha fadhiisiyaye, ka warama haddii uu sii waynaado oo hadda waa Yurub kaliyahe uu aduunka kale oo dhan gaadho. Xaggee la mari tollow? Dhulka laftiisa soo Ilaahay ma laha oo maba joojin karo isu socodka? Kaba soo durug waxyaabahaas fog, ka waran haddii Ilaahay uu joojiyo hawadan aan ku neefsano muda 5 daqiiqadood ah?
Haatan iyo dan, qof walowba Ilaahaygii ku abuuray dib ugu noqo, isaga ayaa ah awooda kaliya ee aduunkan kala wada. Wuxuu inala sugayaa ajal cayiman oo aan inyarna laga hormaraynin inyarna laga dib dhacaynin. Qof walba waxay qiyaamadiisii kacday marka uu dhinto, waxaynuna wada ogsoonahay inaynu dhiman dhammaanteen. Madaxwaynihii Boland imisa la taliye iyo imisa dhakhtar ayuu lahaa baad u malayn? Cidina way ka caabin wayday geerida, Baraak Obaamana waa sidaas oo kale iyo Nicolas Sazkozy. Awood Ilaahay ayaa iska leh, wuxuuna si joogta ah inoo tusayaa awoodiisa, laakiin micne waynba inooguma fadhido oo waxay agteena ka noqotay wax iska caadi ah.
Waxaynu isku ognahay in masaajida la galo oo Ilaahay loo tawbad keeno. Warka bishaarada ahina waxaa weeye inay towbadu furan tahay hadda aad akhriyayso maqaalkan. Xigasho Kismaaynews	Maqaal: Tafaraaruqaan iyo kala daad sanaantaan baahday xagay salka ku haysaa?	RAXAN KA REEBEEY ALIF WAX MALEH IYO WAALEEYAHAY KALA DAAYA	Bashiir Yusuf: Soomaaliya iyo carbis	Caalim Caalamka wareegaya shiddo la’aan iyo ardaygiisii aan godkuu galaba ku badbaadayn? Suldan Garyare	FARIINI WAA QAAN SOOMAALIYEEY "BY YUUSUF BASHIIR"	SOOMAALIYA MA XOR BAA MISE WAA MAXMIYAD HOOS TIMAADA QARAMADA MIDOOBAY (TRUSTEESHIP COUNCIL OF THE UNITED NATIONS)?	Heshiiska TFG iyo SKA Air Logistics Qalinka (Shakib Dhowre)	Hay’adda Cuntada Adduunka ee WFP Maxay Tahay Shaqadeedu? (QAYBTII SADDEXAAD.	Hay’adda Cuntada Adduunka ee WFP Maxay Tahay Shaqadeedu? (QAYBTII LABAAD)	Hay’adda Cuntada Adduunka ee WFP Maxay Tahay Shaqadeedu (Qaybta 1aad)By Suldaan Garyare	Faallo:- Nabad la’aanta ka jirta dalka Soomaaliya waxay salka ku haysaa dhul kala sheegashada iyo Sed-bursiga Soomaalida.	Ileyn Nimaan Xishoon Dagaal Xeeli Kama Heyso: Suldaan Garyare	DUULAN GALGALA MISE FASHILAAD FAROOLE.‏ (Qalinkii Xassan Carab)	RAAFKA DADKA KA SOO JEEDA K/SOOMAALIYA TALAABO KHALDAN	CALANKEENU LEBEIS MIYUU GALAA IYO ISTUSTUS!	Kaynaan, Kali Kaabay kaalin la wada gabey "1 By Bashiir M. Xersi."	The Roots of the Islamic Conflict in Somalia by Dr Baadiyoow	Puntland! Sidee Xega loo Xagta oo Ilka Unabad Galaan. Maqaal Puntlander	Ma tanaa Turkigiina Baqal usoo fuulay .‏Qore-Xassan Carab	Hambalyo iyo bogaadin ku socota Isimada Gobalka Bari by DR Yusuf Isse	Puntland Iyo Cadaalada By Dr: Yusuf Issa	Urur Diimeedkii Ahlu Sunna Wal Jamaaca oo noqday xero doofaar ku soo xoomay oo xaalkeed Ilaah wax ka ogyahay	Wiil 11sanojir ah uu sababay IN haweenay Gaalo ah Muslimiyo	Magac u Yaallo mise Mansib u Yuurarayaal?!.	Soomaaliya ma argagaxisaa joogto? Dr:Yusuf Essa	Qiso Cajiib ah – Dagaal Waa Tab iyo Xeelad	13 jirbaan ahaa goortaan Ogaaday in layna gumeysto waxay ahayd markaan la kulmay 2 qiso oo iyaab galiyaya.	Taariikh Muhiim ah oo ku saabsan dagaalkii 77 ee dhexmaray Soomaaliya iyo Itoobiya	Shirka Addis Ababa iyo Shuyuukhda Ahlusunna.	Home | Contact Us Design By ©2006-